Amazon Shopping - Search Fast, Browse Deals Easy 18.16.0.100 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 18.16.0.100 လြန္ခဲ့ေသာ3ရက္က
Application မ်ား ေစ်း၀ယ္ျခင္း Amazon Shopping - Search Fast, Browse Deals Easy
Amazon Shopping - Search Fast, Browse Deals Easy ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
* ဖောက်သည်တစ်ခုတည်း app ကိုကနေကမ္ဘာတဝှမ်း Amazon ရဲ့ဆိုဒ်များမဆိုအပေါ်ထုတ်ကုန်သန်းပေါင်းများစွာစျေးဝယ်နိုင်ကြသည်
* အသုံးပြုမှု Alexa သင်စျေးဝယ်-ရုံ, အမေဇုံအပေါ်ထုတ်ကုန်များအတွက်ရှာဖွေသင့်ရဲ့အမိန့်ကိုခြေရာခံ, သင်၏အကြိုက်ဆုံးပစ္စည်းများပြန်စီရန်ကိုယ်တော်၏အသံကိုကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုဖို့ကူညီပေးဖို့။ မိုက်ခရိုဖုန်းအိုင်ကွန်ကိုအသာပုတ်ပြီး "အဘယ်အရပ်သည်ငါ့ပစ္စည်းပစ္စယင်?" ပွင့်လင်းအမိန့်ဝင်ရောက်ဖို့ပြောကြပါတယ်။ "စက္ကူလက်သုတ်ပုဝါပြန်စီ" ဒါမှမဟုတ် "ပိုပြီးဘက်ထရီကိုဝယ်" ဟုထုတ်ကုန်ပြန်စီ။
* 1-Click သာသနာကို, ဖောက်သည်ထောက်ခံမှု, Wish Lists မတစ်ဦးကလေးသို့မဟုတ်မင်္ဂလာဆောင် registry ကိုဖန်တီးသို့မဟုတ်ရှာတွေ့, အမိန့်ခြေရာခံခြင်းနှင့်ထို့ထက် ပို. ၏အားသာချက်ကိုယူ
* Scan ကိုထုတ်ကုန်ဘားကုဒ်များနှင့်ရုပ်ပုံများကိုစျေးနှုန်းတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်၎င်းသည်စကင်ဖတ် အသုံးပြု. ရရှိနိုင်မှုစစျဆေးဖို့
နေ့နှင့် Lightning အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်၏သဘောတူညီချက်အပါအဝင်အသစ်အပေးအယူမရရှိနိုင်ဖြစ်လာသည့်အခါအလိုအလြောကျအကြောင်းကြားရ - * ရွှေ Box ကိုအပေးအယူများထွက် Check
* ပိုပြီး Send နှင့်ရှယ်ယာလင့်များထုတ်ကုန်အီးမေးလ်, SMS ကို Facebook ကနေတဆင့်, Twitter နှင့်
အခါသင့်အမိန့်သင်္ဘောများသိရန်လိုအလျှောက်တင်ပို့အသိပေးချက်များအတွက် * သင်္ကေတပြ-Up နှင့်ရောက်ရှိ
* အားလုံးအရောင်းအလုံလုံခြုံခြုံလုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ကြောင်း သိ. ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူ Buy
အမေဇုံစျေးဝယ် app ကိုသငျသညျထုတ်ကုန်သန်းပေါင်းများစွာစျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ဘယ်နေရာကနေမဆိုသင့်ရဲ့အမေဇုံအမိန့်စီမံခန့်ခွဲပေးတယ်။ , Browse ဦးစီးဌာနကဆိုင်, စျေးနှုန်းတွေကိုနှိုင်းယှဉ်, မိတ်ဆွေများနှင့်အတူပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ, ရှယ်ယာထုတ်ကုန်ကိုဖတ်, သင်၏အမိန့်၏ status စစ်ဆေးပါ။
, သင့်ရှာဖွေရေးအတွက်စာရိုက်သင့်ကင်မရာနှင့်အတူဘားကုဒ်ကိုဒါမှမဟုတ် image ကိုစကင်ဖတ်ဖို့, သို့မဟုတ်သင့်စကားသံကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဈေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ လွယ်ကူသော Lightning အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်မှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်နေ့၏သဘောတူညီချက်နဲ့သဘောတူညီမှုလက်လွတ်ဘယ်တော့မှမ။ သင်တို့သည်လည်းအခါသင့်အမိန့်သင်္ဘောများသိရန်တင်ပို့အသိပေးချက်များအတွက်-sign up ကိုများနှင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါ။ သင်ရုံအပြည့်အဝ Amazon.com site ပေါ်တွင်လိုပဲသင့်ရဲ့စျေးဝယ်လှည်း, Wish Lists မ, ပေးချေမှုနှင့်ချုပ်ရေကြောင်း options များအပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်, Subscribe & Save လုပ်ရန်အလို့ငှာသမိုင်းနှင့် 1-နှိပ်ပါ setting များကို။ အားလုံးအမေဇုံစျေးဝယ် app ကိုဝယ်ယူမှုသည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစာဝှက်စောငျ့ရှောကျဖို့အမေဇုံရဲ့လုံခြုံသောဆာဗာကတဆင့်ဖြတ်သန်းနေကြသည်။
အမေဇုံစျေးဝယ် app ကိုစနစ်တကျ operate လုပ်ဖို့အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်လိုအပ်သည် ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ:
* ဆက်သွယ်ရန်: သင်အမေဇုံ app ကို install လုပ်ဖို့သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်သို့မဟုတ်ဖိတ်ကြားချက်ကိုမှအမေဇုံလက်ဆောင်ကတ်များပေးပို့ခွင့်ပြုသည်။
* ကင်မရာ: အမေဇုံ app ကို device ကိုပေါ်ရှိသင့်ကင်မရာကိုရယူသုံးစွဲခွင့်ပြုသည်။ သငျသညျလက်ဆောင်ကတ်များနှင့်အကြွေးဝယ်ကတ်များကိုထည့်သွင်းရန်, အဖုံးသို့မဟုတ်ယင်း၏ဘားကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်ဖို့အားဖြင့်ထုတ်ကုန်ကိုရှာဖွေသင့်ကင်မရာကိုသုံးနိုင်သည်, သို့မဟုတ်တွေကို product review အတွက်ဓာတ်ပုံများကိုထည့်သွင်းဖို့။
* ဖလက်ရှမီး: အမေဇုံ app ကိုလက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်ပင်နိမ့်အလင်းသို့မဟုတ်မှောင်မိုက်အခြေအနေများအတွက်ကင်မရာအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ထုတ်ကုန်ကိုရှာဖွေဖို့လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုသုံးနိုင်သည်။
* မိုက္ကရိုဖုန်း: အမေဇုံ app ကိုရှာဖွေနှင့်သင်၏လက်ထောက်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ရန်သင့်စကားသံကိုအသုံးပြုရန်သင်၏မိုက်ခရိုဖုန်းကိုဝင်ရောက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
* တည်နေရာ: သင်ဒေသခံကမ်းလှမ်းမှုရှာဖွေတွေ့ရှိကူညီခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းလိပ်စာများကိုရွေးဖို့သင့်တည်နေရာကိုဝင်ရောက်ဖို့အမေဇုံ app ကိုကခွင့်ပြုသည်။
* အကောင့်: သင်က Facebook သို့မဟုတ်အခြားလူမှုရေးကွန်ရက်များမှတဆင့်သင့်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုများနှင့်အတူအမေဇုံအပေါ်ထုတ်ကုန် share ရန်ခွင့်ပြုသည်။
* ဖုန်း: သင်၏ဖုန်းရဲ့ခလုတ်ပေါ် pre-populate အမေဇုံဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအရေအတွက်အမေဇုံ app ကိုကခွင့်ပြုသည်။
* သိုလှောင်မှု: တချို့ features တွေကို load နှင့်ပိုမြန် device ကိုအပေါ်ကို run နိုင်အောင်အမေဇုံ app ကိုသင့်ရဲ့ဦးစားပေးသိမ်းဆည်းထားရန်ခွင့်ပြုသည်။
* က Wi-Fi ကို: ဒီခွင့်ပြုချက်တစ် Dash Button ကိုဖြစ်စေတက် setting လာသောအခါအသုံးပြုသောသို့မဟုတ်အမေဇုံစျေးဝယ် app ကို အသုံးပြု. Wand Dash ဖြစ်ပါတယ်။
OS ကလိုအပ်ချက်များ: Android ကို OS က 4.4 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားပြီးနောက်ဘက်-facing ကင်မရာလိုအပ်သည်။ Tablet များအဘို့အမေဇုံ App ကို Google Play တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ app ကို install နှင့်စျေးဝယ်ကိုစတင်ရန် "အမေဇုံ Tablet ကို" အတှကျရှာပါ။
Amazon Shopping - Search Fast, Browse Deals Easy အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Amazon Shopping - Search Fast, Browse Deals Easy အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Amazon Shopping - Search Fast, Browse Deals Easy အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Amazon Shopping - Search Fast, Browse Deals Easy အား အခ်က္ျပပါ
apps-me စတိုး 53.8k 16.49M
Amazon Shopping - Search Fast, Browse Deals Easy ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
Amazon Shopping - Search Fast, Browse Deals Easy ၏ အျခား APK ဗားရွင္းမ်ား
APK အေၾကာင္း Amazon Shopping - Search Fast, Browse Deals Easy အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 18.16.0.100
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/?ie=UTF8&nodeId=468496
Release date: 2019-08-21 02:37:15
Amazon Shopping - Search Fast, Browse Deals Easy APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ